HAYAAN: “Waxaan meeshan ku ilaalinaynaa magaca iyo sumacada dadkeena” – somnieuws.com
HAYAAN: “Waxaan meeshan…
HAYAAN: “Waxaan meeshan ku ilaalinaynaa magaca iyo sumacada dadkeena”
Guddoomiyaha Jaaliyadda Soomaalida Magaalada Zwolle iyo Magaalooyinka ku dhow dhow aqoonyahan Axmed Hayaan ayaa ka warbixiyey go’aanno cusub oo dowladda Nederlands ay ka soo saartay caawa xakamaynta cudurka Covid 19 oo muddooyinkii u dambeeyay ku sii fidiyey, iyada oo ay kor u sii kacayaan tirada dadka uu xanuunkaasi soo ridanayo.
Aqoonyahan Axmed Hayaan, isaga oo faahfaahinaya go’aannada caawa la soo saaray, wuxuu ku nuuxnuuxsaday in guddigoodu ay xil wayn iska saarayaan sidii ay waalidiinta Soomaalida, gaar ahaan kuwa ay ku adag tahay fahamka luqadda Dutch-ka in ay Soomaali ugu tarjumayaan go’aannada, ayna gaarsiin doonaan.
“Waxaa la mamnuucay in tiro ka badan 3 qofood aysan soo booqan karin guryaha, marka laga reebo caruurta ilaa 12 jirka ah. Ilaa 40 qofood ayaa la oggol yahay in ay shiri karaan, isboortiga iyo goobaha lagu caweeyo waxaa la xirayaa 3 saac habeenkii, 4 saac na qofka ugu dambeeya ayaa ka soo baxaya” Ayuu yiri Axmed Hayaan, wuxuuna intaasi raaciyay in dhinacyada ay Soomaalida ka qusayn karaan go’aannada caawa soo baxay in ay tahay waalidiinta caruurtooda geeya kubadda oo laga mamnuucay in ay gudaha la galaan.
“Go’aannada soo baxay meelaha ay mushtamac ahaan innaga quseeynayaan waxaa ka mid ah; waalidiinta caruurtooda kubadda geeya inay ogaadaan in la joojiyay in ay garoonka la tagaan, oo ay tahay in caruurta keligood la diro, ama la geeyo, lagana soo laabto” Ayuu yiri Hayaan.
Axmed Hayaan oo waraysi siiyey majaladda SOMNIEUWS.COM mar la waydiiyay wada-shaqaynta ururka uu madaxda ka yahay kala dhexeeysa Gemeentiga Zwolle, waxa uu sheegay in tan iyo markii isaga iyo team-kiisu ay la wareegeen hogaanka jaaliyada in ay soo laabatay kalsoonidii iyo wada-shaqayntii ay gemeentigu la lahaayeen Soomaalida, ayna ugu wacan tahay iyaga oo mushtamacooda si daacadnimo ah ugu shaqaynaya.
“Waxaan meeshan ku ilaalinaynaa magaca iyo sumacada dadkeena, waana waajib inna saaran, ma jirto mansab iyo dhaqaale aan ka doonayno, waxaa la nool nahay dadyow kala duwan oo ajnabi ah waxaan isu aragnaa inaan dalkeena safiir u nahay, waxaanna ku dedaalaynaa inaan dadyowga kale la mid noqono haddiiba aynaan ka hormarin” Ayuu yiri Axmed Hayaan, wuxuu intaasi raaciyay in ay isu xilsaareen in ay ubadka Soomaaliyeed iyo hooyooyinka caawiyaan.
“Gemeentigu wuu ina garab taagan yahay. Axad walba waxaa xarunta lagu caawiyaa caruur Soomaaliyeed, waxaanna laga caawiyaa casharada iskuulka iyo tarabiyadda islaamka. Dumarka Soomaalida subax walba oo Khamiis ah ayeey isugu yimaadaan xarunta, Khamiis walba hal mowduuc ayeey soo wada diyaariyaan oo ay ka wadahadlaan, waxaan oran karnaa jaaliyadu gacmaha ayaay is qabsatay” Ayuu yiri Axmed Hayaan, wuxuuna intaasi raaciyay in ay ku soo biireen macalimiin Suuriyaan ah oo garab ku siiya barashada caruurta ee qur’aanka kariimka.
“Jaaliyadeenu ma ahan, mid qof keligii uu jeebka ku wato, sida tii innaga horeysay, waxaan howsha ku wadnaa isla go’aamin iyo wada-tashi ka dhexeeya dad aqoonyahanno ah, dhaqanka iyo luqada dalkanna si wanaagsan u yaqaan” Ayuu yiri Axmed Hayaan.
Holland, oo lagu qabtay kulan looga hadlayay caqabadaha ay la kulmaan ubadka Soomaalida [Sawirro]